Iindaba-Umzobo wesiphelo sesiphelo
Ukusika okukhawulezayo kunye nokuqina okukhulu, sebenzisa iindawo zokugqibela zokusila ezimfutshane ezinobubanzi obukhulu
Izinto eziguqulwayo zokuphela kwe-helix zinciphisa incoko kunye nentshukumo
Sebenzisa i-cobalt, PM / Plus kunye ne-carbide kwizixhobo ezinzima kunye nokusetyenziswa okuphezulu kwemveliso
Faka isicelo sokwaleka kokutya okuphezulu, isantya kunye nobomi besixhobo
Ukuphelisa iintlobo zeMill:
Indawo yokugaya isikwere zisetyenziselwa izicelo zokugaya ngokubanzi kubandakanya ukusikeka, ukwenza iiprofayili kunye nokusika.
Iindlela zokuphela kweendlela eziphambili zenziwe ngobubanzi bokusika obungaphantsi ukuvelisa ubungakanani obungqingqwa phakathi kwesitshixo sendlela abayinqumleyo kunye nesitshixo senkuni okanye isitshixo.
Iibhola zokugaya ibhola, ekwaziwa ngokuba iibhola zokuphela kwempumlo zebhola, zisetyenziselwa ukuguba imiphezulu egxunyekwe, ukucheba kunye nokufaka epokothweni. Wokugaya ekupheleni ibhola yakhiwe ngohlangothi ukusika ngeenxa kwaye kusetyenziswa machining of dies kunye ngumngundo.
Amatye okusila aqwengayo, ezikwabizwa ngokuba zizingulube zehagu, zisetyenziselwa ukususa ngokukhawuleza izixa ezikhulu zemathiriyeli ngexesha lomsebenzi onzima. Uyilo lwamazinyo luvumela ukungcangcazela okuncinci, kodwa lushiya ukugqitywa okungaphezulu.
Iindawo zokugaya zokuphela kweeradiyo zekona Unomphetho wokusika ojikeleziweyo kwaye uyasetyenziswa apho kufuneka ubungakanani berediyasi ethile. Iikona zokusila eziphelileyo zekona zinomphetho wokusika ojikeleziweyo kwaye zisetyenziselwa apho ubungakanani berediyasi ethile bungafuneki. Zombini ezi ntlobo zibonelela ngesixhobo sobomi obude kunezixhobo zokusila zesikwere.
Ukurhabaxa kunye nokugqiba okusila zisetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zokugaya. Basusa izinto ezinzima ngelixa bebonelela ngokugqibeleleyo ngaphandle kokupasa kube kanye.
Iikona zokugqibela zeekona zokusila zisetyenziselwa wokugaya imiphetho ngeenxa zonke. Baneengcebiso zokusika umhlaba ezomeleza ukuphela kwesixhobo kunye nokunciphisa ukusika komphetho.
Izixhobo zokusila zizixhobo zemisebenzi emininzi ezisetyenziselwa ukubala, ukubhola, ukuphikisa, ukujija kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yokugaya.
Iitayile zokusila zokuphela zenzelwe ngohlangothi ukusika ukuba Tapers ekupheleni. Zisetyenziswa kwizicelo ezininzi zokufa kunye nokubumba.
Iimbande zibonisa imijelo okanye iintlambo ezisikiweyo emzimbeni wesixhobo. Inani eliphezulu leembande lonyusa amandla esixhobo kwaye linciphise indawo okanye ukuhamba kwe-chip. Ukuphelisa amatye anezimbande ezincinci kumda wokusika kuya kuba nendawo ethe kratya yetshiphu, ngelixa amatye okusila anemitshini emininzi anokukwazi ukusetyenziswa kwizinto zokusika ezinzima.
Flute enye uyilo zisetyenziselwa ukukhawulezisa isantya esiphezulu kunye nokususwa kwezinto eziphezulu.
Iiflethi ezine / ezininzi Uyilo luvumela amaxabiso okondla okukhawulezayo, kodwa ngenxa yokuncipha kwesithuba, ukususwa kwe-chip kunokuba yingxaki. Bavelisa ukugqitywa kokucoceka ngakumbi kunezixhobo ezibini kunye nezintathu. Efanelekileyo kwipheripherali kunye nokugqiba ukugaya.
Iifluti ezimbini zoyilo zinesona sixa sikhulu sembande. Bavumela ubuninzi bokuthwala i-chip kwaye basetyenziswa ikakhulu ekubekeni nasekwenzeni izixhobo ezingafakwanga.
Iifluti ezintathu Uyilo lunesithuba esineempempe ezimbini njengeembande ezimbini, kodwa zikwanalo necandelo elikhulu lomnqamlezo lamandla amakhulu. Zisetyenziselwa ukufaka epokothweni kunye nokubeka izinto eziyintsimbi kunye nezinto ezingafakwanga.
Izixhobo zokusika izixhobo:
Isantya esiphakamileyo sentsimbi (HSS) ibonelela ngokuxhathisa kokunxiba okuhle kunye neendleko ezingaphantsi kweecobalt okanye izixhobo zokusila zekhabhide. HSS isetyenziselwa jikelele-injongo wokugaya zombini izinto zentsimbi kunye nonferrous.
Isantya esiphezulu seVanadium (HSSE) yenziwe ngesantya esiphezulu sentsimbi, ikhabhoni, i-vanadium carbide kunye nezinye ii-alloys eziyilelwe ukunyusa ukunganyangeki kokunxiba nokuqina. Kuqhele ukusetyenziswa kwizicelo ngokubanzi kwii-steels ezingenasici kunye ne-alumum ephezulu ye-silicon.
ICobalt (M-42: 8% yeCobalt): Ibonelela ngobunzima bokunxiba okungcono, ubunzima obushushu obuphezulu kunye nobulukhuni kunesantya sentsimbi (HSS). Kuncipha kakhulu okanye ukujija kancinci phantsi kweemeko zokusika kakhulu, ukuvumela isixhobo ukuba sisebenze i-10% ngokukhawuleza kune-HSS, kukhokelela kwizinga lokususa isinyithi kunye nokugqitywa okuhle. Isixhobo esinexabiso eliphantsi esilungeleyo ukwenza i-iron cast, i-alloys kunye ne-titanium alloys.
Umgubo wentsimbi (PM) inzima kwaye iyabiza kakhulu kune-carbide eqinileyo. Inzima kwaye ayithambekele ekwahlukaneni. I-PM isebenza kakuhle kwimathiriyeli <30RC kwaye isetyenziselwa ukothuka okuphezulu kunye nokusetyenziswa kwesitokhwe esiphezulu njengokurhabaxa.
Ikhabhayithi eqinileyo ibonelela ngokuqina okungcono kunesantya esiphezulu sentsimbi (HSS). Ubushushu obugqithisileyo bumelana nokusetyenziswa kwesantya esiphezulu kwi-iron cast, izinto ezingafakwanga ndawo, iiplastikhi kunye nezinye izinto ezinzima zomatshini. Indawo yokuphela kweCarbide ibonelela ngqongqo olungcono kwaye inokuqhutywa nge-2-3X ngokukhawuleza kune-HSS. Nangona kunjalo, amaxabiso okutya okunzima afanelekileyo ngakumbi kwi-HSS kunye nezixhobo ze-cobalt.
Iingcebiso ngeCarbide zinebrashi kumda wokusika wezixhobo zetsimbi. Basika ngokukhawuleza kunesantya esiphezulu sentsimbi kwaye zihlala zisetyenziswa kwizinto eziyintsimbi kunye nezingafakwanga kubandakanya isinyithi, intsimbi kunye neentsimbi. Izixhobo zeCarbide-tipped yindlela efanelekileyo yokufumana izixhobo ezinkulu.
Idayimani yePolycrystalline (PCD) yidayimani eyothusayo- kunye nokunxiba enganyangekiyo evumela ukuba isikwe ngesantya esiphezulu kwizinto ezingaphephekiyo, iiplastiki, kunye nealloys ezinzima kakhulu kumatshini.
Iingubo eziqhelekileyo / ukugqiba:
I-Titanium Nitride (TiN) Isambatho esinjongo-jikelele esibonelela ngokuthambisa okuphezulu kunye nokwandisa ukuhamba kwe-chip kwizixhobo ezithambileyo. Ukuchasana nobushushu kunye nobulukhuni kuvumela isixhobo ukuba sisebenze ngesantya esiphezulu se-25% ukuya kwi-30% kwizantya zomatshini ngokuchasene nezixhobo ezingafakwanga.
I-Titanium yeCarbonitride (TiCN) Inzima kwaye inxiba ngakumbi kuneTitanium Nitride (TiN). Ihlala isetyenziselwa intsimbi engenasici, i-iron cast kunye ne-aluminium alloys. I-TiCN inokubonelela ngesakhono sokuqhuba usetyenziso ngesantya esiphezulu sokujija. Sebenzisa isilumkiso kwizixhobo ezingafakwanga ngenxa yokuthambekela kwenyongo. Ifuna ukonyuka nge-75-100% kwizantya zoomatshini xa kuthelekiswa nezixhobo ezingagqunywanga.
I-Titanium yeAluminiyam yeNitride (TiAlN) inobunzima obuphezulu kunye nobushushu be-oxidation xa kuthelekiswa neTitanium Nitride (TiN) kunye neTitanium Carbonitride (TiCN). Ilungele insimbi engenasici, i-alloy ephezulu ye-carbon steels, ii-alloys ezisekwe kubushushu obuphezulu kunye neetoyile alloys. Sebenzisa isilumkiso kwizinto ezingafakwanga ngenxa yokuthambekela kwenyongo. Ifuna ukonyuka nge-75% ukuya kwi-100% kwisantya semitshini xa kuthelekiswa nezixhobo ezingagqunywanga.
IAluminiyam iTitanium Nitride (AlTiN) yenye yeengubo ezirhabaxa ezinganyangekiyo kwaye kunzima. Kuqhele ukusetyenziswa xa kusenziwa inqwelo moya kunye nezinto zearospace, nickel ingxubevange, intsimbi engatyiwa, titanium, intsimbi yentsimbi kunye nekhabhoni yentsimbi.
Zirconium Nitride (ZrN) Iyafana neTitanium Nitride (TiN), kodwa ineqondo lobushushu eliphezulu le-oxidation kwaye iyala ukuxhamla kunye nokuthintela ukwakhiwa komphetho. Iqhele ukusetyenziswa kwizinto ezingafakwanga ndawo ngaphandle kwe-alferi kubandakanya ialuminiyam, ubhedu, ubhedu kunye neetanium.
Izixhobo ezingafakwanga musa ukubonisa unyango oluxhasayo kumda wokusika. Zisetyenziselwa ukunciphisa isantya kwizicelo ngokubanzi kwizinyithi ezingafakwanga.